एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ? यी चीज खाईदिनुस्, ५ दिनभित्र आफैँ हेर्नुस् चमत्कार ! – Krazy NepaL
May 20, 2021 735
Prevसपनामा विहे गरेको देख्नु भयो ? दिन्छ यस्तो संकेत
Nextदुब्लो व्यक्तिमा हुनसक्छ यस्तो रोग, कसरी मोटाउने ?
“शास्त्र अनुसार गणेशलाई किन तुलसी चढाउनु हुँदैन ? दूबो किन चढाइन्छ ?”
आफूले पदबाट राजिनामा दिए देश बर्बादीतिर धकेलिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई